Ingxaki 3, iAcer Aspire One: Isitshixo esinye-iGeofumados
NgoSeptemba, 2009 Ezahlukeneyo
Emva kokusebenza, elinye lamaqhosha kubonakala ngathi lixinekile, ndilicofa kancinci kwaye alibhali, lifuna uxinzelelo olomeleleyo. Mfana, kuyacaphukisa ukuba nesitshixo esinje, kwiibhodi eziqhelekileyo kwakulula ukuthenga ikhibhodi entsha kunokulungisa isitshixo, kodwa kwimeko yelaptop ayisiyonto ilula kangako.
Kuya kufuneka uqale ngokubona ukuba leliphi na isitshixo, umzekelo, ukuba ngaba ziiscroll scroll, unobumba x, z, c, s, f, a, do, ibar space kwaye unabantwana abasebenzisa ikhompyutha; isenokuba ngenxa yokusebenzisa kakhulu ezi zitshixo kwimidlalo. Uninzi lwabantwana alunankathalo, bade babethe izitshixo xa bephulukana nomdlalo okanye bakholelwe ukuba ukubetha ngakumbi ngakumbi kuya kuba yingozi.
Ukuba akukho malunga nezi ziqwenga, eyona nto iqinisekileyo kukuba kukho into esendleleni, kuba izitshixo ze Aspire enye Ziliqokobhe elincinci leplastiki elixhonywe kwisitya sensimbi esinyanzela phezulu, uyilo lwayo olulula alucebisi ukuba lonakaliswe kukusetyenziswa kwesiqhelo.
Ukuyicombulula, ngesitshixo isitshixo sitsalwa, sisitsale kwelinye icala, sithambile kodwa siqinile. Kuqala phezulu, uyitsalele kwikona, emva koko ngezantsi, ukusuka ezantsi, uyitsale.
Yazi ukuba yayintoni: isikhonkwane. Kwaye andithethi ngento ethile engaqondakaliyo, isikhonkwane sokubhabha kwabo baphaphazela xa ubasika.
Kwaye ngenxa yoko inokuchaphazela izinto ezihlala ziwela apho, ezinje ngeenwele, iimvuthu, iimfele zembewu, njl. Emva koko isiqwenga sibekwe ngokuqinileyo, kwaye sicinezelwe ngomnwe kancinci. Ukuba oku akusombululwanga, akukho khetho ngaphandle kokufumana iworkshop.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Mna, iCadastre kunye neGoogle Earth
Post Next 10 iimpendulo ezinomdlaOkulandelayo »
2 Uphendula "Ingxaki 3, i-Acer Aspire One: Isitshixo esinye"
Akukho ngqondo, kubonakala ngathi umqhubi wegundwane wenzakele.
UMaria Slim uthi:
Molo, unyana wam une-Acer ASpire One D260. Kwiiveki ezimbalwa, ipaneli yokuthinta ayiphendulanga, ihamba ngokungachanekanga kwaye inzima (okanye akunakwenzeka ukuyisebenzisa). Ndiqhagamshele imouse ngaphandle kwamacingo, nangona isebenza ngcono ayisebenzi kakuhle nokuba. Sibuyisele ulawulo lwesikhombisi kumaxabiso asisiseko (kwimeko yokuba sitshintshe into ngempazamo) kodwa ayisebenzi. Ngaba uyazi ukuba kunokuba yintoni?